Fa maninona no tsy fantatrao hoe iza aho? | Martech Zone
Zava-dehibe ny manaja mialoha ny vina aman-draharaham-barotra ataontsika mba hahazoana antoka fa mahazo ny mpanjifa mety isika. Raha manao sonia ireo mpanjifa tsy mety isika dia fantatsika avy hatrany satria tsy mahomby ny famokarana ataontsika, mihabe ny habetsaky ny fivoriana ary mihombo ny fahasosorana miditra amin'ilay fifandraisana. Tsy tianay izany. Tianay ny mpanjifa mahatakatra ny fizotrantsika, manome lanja ny fifandraisanay ary mahita ny valiny azonay amin'izy ireo.
Androany tolakandro dia tsy maintsy nanao aho ny antso ho an'ny namako sy mpiara-miasa amiko, Chad Pollitt ao amin'ny Kuno Creative. Chad dia manana fifandraisana lehibe amin'ny mpivarotra lehibe izay tadiavinay hividy. Miaraka amin'ny fahazoan'ny bilaoginay, ny fifandraisana akaiky ananantsika miaraka amin'ny orinasan'izy ireo, ary ny mpanjifa manan-danja ananantsika… Matoky aho fa ny mpitarika ao amin'ny orinasan'izy ireo dia mankasitraka ny fiaraha-miasa aminay.
Mampalahelo fa manana fizotrany anaty boaty izy ireo izay mitaky ny hiresahako amina mpivarotra, hamaly ny fanontaniako mialoha, hiresahana amin'ny mpitantana fantsona, hijerena horonan-tsary vitsivitsy nalefan'ny mpitantana fantsona, hamaly ny takelaka misy fanontaniana 50… ary fantatr'Andriamanitra izay manaraka.
Tsy fantatr'izy ireo ve hoe iza aho?
Tsy midika izany fa amin'ny karazana fahatsapana tsy misy dikany. Diso fanantenana fotsiny aho fa tena misy izy ireo tsy mahalala hoe iza aho! Niroborobo ny fikambanan'izy ireo… tahaka ny fizotrany… ary manana olona maromaro ao anatin'ny fizotran'izy ireo mpivarotra izay tsy dia hain'izy ireo loatra amin'ny indostria izy ireo ka tena tsy fantany hoe manana anarana sy laza tsara aho ao anatiny. Tsy mino aho fa nanokana fotoana hijerena koa izy ireo. Isa tsotra fotsiny aho ao amin'ny fantsom-pivarotan'izy ireo.
Kivy aho satria niasa mafy nanangana fanekena sy fanarahana lehibe izay ananako. Tsy Steve Jobs aho… fa ao anatin'ny sehatry ny indostria kely dia azoko antoka fa hiseho aho ao anatin'ireo olona 25 ambony izay mahatakatra ny zavatra tadiavin'izy ireo hotanterahina, miresaka momba azy ary mizara momba izany. Ny bilaoginay dia manana tratra ao anatiny ny indostrian'izy ireo, fa ny olona amin'ny fizotrany varotra dia tsy fantatra.
Ohatra tsara amin'ny varotra ity diso ny fizotrany. Ny zavatra voalohany ataoko rehefa misy orinasa mifandray amiko amin'ny mety ho orinasa dia ny mikaroka azy ireo. Indraindray izahay manao raharaham-barotra satria ho mpanjifa tsara izy ireo… saingy imbetsaka izahay manao raharaham-barotra satria ho fotoana lehibe ho antsika io!
Mety tsy hameno ny takelaka aho. Hiandry aho mandra-pahitan'ny fifandraisan'i Chad na te-hiara-hiasa amin'ny mpitarika hafa eo amin'ny sehatry ny asa izy ireo. Ho diso fanantenana raha tsy nanao izany izy ireo satria nipetraka tamin'ny demo aho ary nahita fitaovana azoko ampiasaina ho an'ny mpanjifanay… fa raha aleon'izy ireo mametraka ahy amin'ny dingana 42 handavana ahy fa tsy hahafantatra hoe iza aho, izaho Tsy azoko antoka fa te hiara-miasa amin'izy ireo aho.
Izay rehetra ataon'ny orinasa dia tsy tokony hatsipy anaty dingana. Ny fizotrany dia tsara ho an'ny milina, fa ny olombelona kosa afaka mieritreritra sy mandray fanapahan-kevitra tsy mampino izay tsy mifanaraka amin'ny dingana iray. Ny fidiranao dia tsy fidirana amin'ny takelaka… olona tena izy ireo. Tokony hanana fanavakavahana amin'ny zavatra rehetra ataonao ianao… manomboka amin'ny fandaharam-potoana, hatramin'ny teti-bola, ka hatramin'ny loharanom-pahalalana ampiharina. Tiako ny hahatsapan'ny tsirairay ny iray amin'ireo vinavinako tonga lafatra toy ny hoe azoko iza izy ireo, ny antony maha-zava-dehibe azy ireo, ary ny fomba hanampiantsika azy ireo.
Ity mpivarotra ity koa dia tokony.
Tags: mampihiditra barotramanaova mialohafahaiza-mitarikaFanamafisana ny varotrafizotry ny varotra
Bravo: sary an-tserasera ny horonan-tsary momba ny horonantsary
Apr 27, 2012 amin'ny 8: 14 AM
Bravo Doug! Vaovao amin'ny bilaoginao aho ary hitako fa tena sarobidy ny fampahalalanao. Miombon-kevitra aminao aho, indraindray mila esorina ireo botsa ary ataon'ny ankolafy misahana ny raharaha ny asa aman-draharaha. fe-potoana.
Apr 27, 2012 amin'ny 10: 11 AM
Zava-dehibe ny fizotrany. Manampy ny mpividy sy ny mpivarotra izany matetika. Saingy, indraindray dia mila atao ankilabao izy io ho an'ny fifampiresahana. Ny ampahany lehibe amin'ny fivarotana dia ny fahafantarana hoe rahoviana no hiala amin'ny dingana ary hiresaka amin'ny olona fotsiny.
Ary nanaiky fa 'kritika ny fikarohana'. Fantaro foana hoe iza no miresaka aminao.
Misaotra ny hevitrao, Douglas. Hampihatra ny valinteninao amin'ny fampiharana.
Apr 28, 2012 amin'ny 3: 47 AM
Sambany eto ary mahafinaritra ny hahafantatra momba anao eto. Toa manasa daholo izay nosoratanao teto
ary fampahalalana. Miverina eto foana aho.
Jun 25, 2012 ao amin'ny 1: 03 PM
Na miresaka fitomboan'ny orinasa ianao na ilay
fampiharana ny teknolojia vaovao, na ny iray dia misy fiantraikany amin'ny tsy fampiasa amin'ny maha-olombelona sy
manaratsy ny fifandraisan'ny olona sy ny olona. Ary tena marketing izany
tombotsoan'ny mpanatanteraka mitady fomba iray hanasongadinana ny olona tsirairay
fifandraisana, na inona na inona ny haben'ny orinasa sy ny karazana haitao misy azy
Amin'ny sehatry ny serivisy ho an'ny matihanina, raha tsy mivoatra a
fifandraisana amin'ny mpanjifa, na manome serivisy ho an'ny orinasa lehibe aho
na kely, matetika aho dia tsy hahatratra ny fivarotana ireo serivisy ireo. izany
tena tsy fahita firy fa hameno taratasy iray fotsiny aho, hanome fanontaniana, hanao dinidinika
ary avy eo mahazo tetikasa. Tsy mitranga izany amin'ny asako; misy foana io
ho momba ny fifandraisana. Amiko, ny mpanjifa rehetra dia tokony hahatsapa ho fantatrao hoe iza
izy ireo dia. Izay ny fifandraisana. Ary raha tsy hitanao ny fomba hanaovana
mahatsiaro ho miavaka ny mpanjifa, ho very asa ianao.